€419 Milyan oo Cocaine ah ayaa laga helay Dekedda Rotterdam • Drugs Inc.eu
Bogga ugu weyn ka dhiman 419 milyan oo Yuuro oo kookayn ah ayaa laga helay dekedda Rotterdam
albaabka Ties Inc. 17 May 2022
maqaal by Ties Inc. 17 May 2022
Intii u dhaxaysay Abriil 17 iyo Maajo 10, ilaa 5.600 kiilo oo kookayn ah ayaa lagu qabtay dekedda Rotterdam intii lagu jiray 11 qalal oo kala duwan. The cocaine waxa lagu qiyaasay 419 milyan oo Yuuro.
Helitaanka ugu weyn ayaa dhacay Abriil 17, markii, sida ay sheegtay Adeegga Xeer Ilaalinta Guud (OM), wadar ahaan 2.000 oo xirmo oo daroogo ah ayaa laga helay saddex sanduuq oo waaweyn. "Saakadyadu waxay ku jireen weel ay ku jireen cillado laga helay baarista. Daroogadu waxay ka timid Costa Rica," ayay tiri OM.
Kooxaha daroogada ayaa sii kordhaya kheyraadka
"Waxay caddaatay 2-dii Maajo in kooxaha daroogada ahi ay si isa soo taraya ugu faa'iidaysanayaan helitaanka meelaha ay ku dhuuntaan." OM waxa ay sheegtay in “1260 xidhmo oo maandooriye ah la ogaaday in lagu dhex qariyey qayb Maraykan ah oo gitaarka ah. Baadhitaan bilow ah ayaa muujisay in konteenarka loo soo raray Panama iyadoo la sii mariyay Mareykanka oo uu dhowr maalmood dul taagnaa goobta laga soo dhoofiyo.
Markabku wuxuu markaas u dhoofay Rotterdam.
Xigasho: nltimes.com (EN)
Israa'iil ayaa dhoofisa iniinta xashiishka markii ugu horeysay
Lixda xaqiiqo ee ku saabsan CBD
Xeerka Muranku Ka Taagan Yahay Ayaa Dupey Bukaanka Maraykanka
Isticmaalka MDMA wuu sii yaraanayaa isticmaalka daroogooyinka kale ayaa ku soo badanaya Yurub
Tusaha ugu dambeeya ee Nicotine-ka-samaynta
Daawooyinka halista ah waxay sababaan xaddi xad dhaaf ah oo dilaa ah…
Isticmaalka MDMA wuu sii yaraanayaa isticmaalka daroogooyinka kale ayaa kor u kacaya gudaha ...